ဒိန်ခဲ, ချဉ်မုန့်, ဒိန်ချဉ်များနှင့်စပျစ်သီးပျဉ်တွေနဲ့မီးဖိုမုန့်စိမ်းအတွက်အီစတာများအတွက်တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတဲ့စာရွက်
မီးဖို၌အီစတာများအတွက်တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတဲ့စာရွက် - ပွဲလမ်းသဘင်မုန့်ဖုတ်ကွိုတငျပွငျဆငျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
မီးဖို၌အီစတာများအတွက်တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတဲ့စာရွက်တစ်ဦးချင်းစီအိမ်ရှင်မမှာဖြစ်သင့်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဖြစ်တည်မှု၏အနှစ်ကျော်, ပွဲလမ်းသဘင်ကိတ်မုန့်အစဉ်အလာ pastry ဖို့ကန့်သတ်ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားလျက်နှင့်မဖြစ်လာကြပါပြီ။ အခုတော့သူတို့ကအချဉ်မုန့်, ဒိန်ချဉ်, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲမရှိကြက်ဥသို့မဟုတ်ဆေးနှင့်အတူဖုတ်နေကြသည်။ ကိုယ်ကသာသင်လိုချင်သောဗားရှင်းကိုရှေးခယျြနှင့်ချက်ပြုတ်စတင်ရန်နေဆဲဖြစ်သည်။
အီစတာများအတွက်တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုချက်ပြုတ်ဘို့ options အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အစဉ်အလာကနေဖန်ဆင်းတော်ကိတ်မုန့် ထောပတ်တဆေးကိုမုန့်စိမ်း ရေမြှုပ်နည်းလမ်း။
ဒါဟာတဆေးမပါဘဲရိုးရှင်းတဲ့ဆေးပေါ်တွင်မုန့်စိမ်းသို့မဟုတ်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲအရသာမီးဖုတ်ထားသောအထဲကပြန်သွားလေ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မုန့်စိမ်းညဉ့်နှင့်နံနက်ဖုတ်ပေါ်တွင်တင်, bezoparnym လမ်း kneaded ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်မှု၏ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတဆေးအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအီစတာတဖြည်းဖြည်းမိတ်ဆက်စကားပါဝငျသညျ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တဆေးကို၎င်းဝန်မကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး, မုန့်စိမ်းမထပါလိမ့်မယ်။
ခွက်ဖုတ်နှင့် rasstaivaetsya 40 မိနစ်တိုးချဲ့မတိုင်မီနဲ့အနားသတ်အားဖြင့်အီစတာအဘို့မုန့်ပြားများအတွက်တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှု။
တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီး ခြောက်သွေ့သောတဆေးနှင့်အတူအီစတာအဘို့အကိတ်မုန့် အလွန်ရေပန်းစားသည်။ မည်သည့်စတိုးဆိုင်၌ရောင်း - အရည်အသွေးလတ်ဆတ်သောတဆေးကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲပြီးခြောက်သွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါမုန့်စိမ်းကတော့ဂန္ဗားရှင်းရဲ့အရသာနှင့်အရည်အသွေးအတွက် conceding သည်မဟုတ်, လျင်မြန်စွာကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက် - တဆေးကိုအပြည့်အဝပူနွေးသောနို့အတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့်လတ်ဆတ်တဲ့အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပွတ်မပေးပါ။
နို့ - 80 ml ကို;
ခြောက်သွေ့သောတဆေး - 10 ဂရမ်,
မုန့်ညက် - 400 ဂရမ်;
ပျားရည် - 20 ဂရမ်,
ရေနံ - 120 ဂရမ်;
စပျစ်သီးပျဉ် - 70 ဂရမ်
မုန့်ညက်၏ 60 ဂရမ် Enter နှင့် 20 မိနစ်ဘေးဖယ်ထား။
ထို့နောက်အားလုံးအရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများ Add နှင့် - မုန့်ညက်။
နှစ်ကြိမ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း Repeat နှင့်ပုံစံများပေါ်မုန့်စိမ်းထားပါ။
ရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတဲ့စာရွက်အီစတာ 40 မိနစ် 170 ဒီဂရီမှာမီးဖိုတဖို၌ဖုတ်။
ကုန်ကြမ်းတဆေးကိုအပေါ်အီစတာအဘို့အကြော် - ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်
မကြာခဏဆိုသလိုပသခါပွဲဘို့ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်တဆေးကိုမုန့်စိမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကြုံတွေ့အိမ်ရှင်မကုန်ကြမ်းတဆေးကိုပိုနှစ်သက် - သူတို့ကြွယ်ဝတဲ့ pastry ကောက်ကပိုမွှေးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြောက်သွေ့တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ Battery ကိုဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ထိုအခါမူကား, အပူချိန်ကွာခြားချက်နှင့်ကိတ်မုန့်ကနေတောင်မကျပါဘူးတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာအဆင်သင့်လတ်ဆတ်နှင့်ဟောင်းနွမ်းမဟုတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မုန့်ညက် - 1.2 ကီလိုဂရမ်;
ပရိုတိန်း -5ကိုအပိုင်းပိုင်း; ။
အနှစ် - 10 PCs; ။
ကုန်ကြမ်းတဆေး - 50 ဂရမ်,
မုန့် - 80 ဂရမ်,
သကြား - 400 ဂရမ်;
ရေနံ - 200 ဂရမ်;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 70 ml ။
သကြား 20 ဂရမ်နဲ့မုန့်ညက် 300 ဂရမ်ကိုငါသွန်းလောင်း။
40 မိနစ်ပြီးနောက်ရှိသမျှသည်အခြားသောပါဝင်ပစ္စည်းများ add နှင့်5နာရီနွေးဖို့စွန့်ခွာ။
180 ဒီဂရီမှာမီးဖို 50 မိနစ်ရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတဲ့စာရွက်အီစတာဖုတ်။
တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီး စပျစ်သီးပျဉ်နှင့်အတူအီစတာဘို့စာရွက် အတိအကျရှိသမျှကိုအီစတာအစဉ်အလာကိုစောငျ့ရှောကျရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့။ စပျစ်သီးပျဉ် - ကိတ်မုန့်တစ်ဦးရိုးရာအစိတ်အပိုင်း။ အချဉ်မွှေးအခြောက်လှန်းအသီးအဆင်းလှသောအရောင်အံ့မခန်းအမြင်ဖုတ်ပေးကာချိုမြိန် muffins ၏အရသာကိုအလေးပေး။ မုန့်စိမ်းမှဖြည့်စွက်ခြင်းမပြုမီ, ကမုန့်ညက်နှင့်အတူဖြန်းဖို့ပိုကောင်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အညီအမျှဖြန့်ဝေသည်။
သကြား - 200 ဂရမ်;
မာဂျ - 100 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 1.5 ကီလိုဂရမ်;
ခြောက်သွေ့သောတဆေး - 20 ဂရမ်,
စပျစ်သီးပျဉ် - 250 ဂရမ်;
ရေနံ - 100 ml ကို။
နို့, သကြား, တဆေးနှင့်မုန့်ညက် 100 ဂရမ်တစ်ဦးဘီယာအရက်ချက်လုပ်ရမည်။
မိနစ် 30 ပြီးနောက်, ဘီယာအရက်ချက်အပေါင်းတို့၌အခြားထုတ်ကုန်များထည့်ပါ။
180 ဒီဂရီ 35 မိနစ်မှာဖုတ်။
အရိုးရှင်းဆုံးအီစတာထောပတ် ကုန်ကြမ်းကြက်ဥနှင့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မရတိုင်းထိုမိနျးမ, ပွဲခံများကဲ့သို့စားပွဲပေါ်တွင်တင်ဆေးနှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသော kneaded ထောပတ်ကိတ်မုန့်နှင့်အမီးဖို၌ဖုတ်ဖို့ဝံ့။ သူဟာနူးညံ့သိမ်မွေ့သော creamy အရသာ, သာယာသောအရသာနှင့် damp, မိုးသည်းထန်စွာမုန့်ဖုတ်၏ပရိသတ်များမှအယူခံမည်ကိုနူးညံ texture ရှိပါတယ်။
မုန့်ညက် - 650 ဂရမ်;
ထောပတ် - 500 ဂရမ်;
ခြောက်သွေ့သောတဆေး - 40 ဂရမ်,
နို့ - 120 ml ကို;
သကြား - 300 ဂရမ်;
ရေနံ - 100 ဂရမ်;
candied - 250 ဂရမ်;
ရမ် - 60 ml ။
12 နာရီအဘို့အရမ်ထဲတွင် candied အသီးချထားပါ။
နို့၏, မုန့်ညက်တဆေး, 20 ဂရမ်သကြားဓာတ်နဲ့ 40 ဂရမ်တစ်ဦးဘီယာအရက်ချက်လုပ်ရမည်။
40 မိနစ်ပြီးနောက်, ရေမြှုပ်အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်ပါ။
မတ်စောက်သောမုန့်စိမ်းကို2နာရီ။
ခွက်နှင့် rasstaivayte 50 မိနစ်အပေါ်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
180 ဒီဂရီမှာမီးဖို 40 မိနစ်အီစတာမီးဖုတ်ထားသောရိုးရှင်းပြီးအရသာရှိတဲ့ဒိန်ခဲစာရွက်။
တဆေးမပါဘဲအီစတာများအတွက်ရိုးရှင်းသောကိတ်မုန့် - ဟာဂန္ဗားရှင်းတစ်ဦးအကြီးအကအခြားရွေးချယ်စရာ။ ဆိုဒါသို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်အမှုန့်များ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူဖုတ်ရိုးရှင်းသောချိုမြိန် pastry ပြင်ဆင်နေသည်။ သေးငယ်တဲ့မှိုကိုသုံးပါ - သင်လျင်မြန်စွာ (မဟုတ်ရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ငွေ့ပျံခြင်းနှင့်အီစတာမထပါလိမ့်မယ်), နှင့်ကကောင်းစွာ propeklas ကြောင်းဖို့လိုတယ်မုန့်စိမ်းပွား။
ဆိုဒါ - 10 ဂရမ်,
powdered သကြား - 120 ဂရမ်;
ရေနံ - 60 ဂရမ်,
သံပုရာ glaze ။
သကြားနှင့်အတူအနှစ် mash ။
တစ်နာရီကို 180 ဒီဂရီမှာဖုတ်။
ကြက်ဥမပါဘဲရိုးရှင်းအီစတာ - ဒီထုတ်ကုန်မှသည်းမခံများထံမှခံရသောသူတို့အဘို့တစ် godsend ။ မုန့်ဖုတ်, စိမ်ချောမွေ့လွယ်ကူလှည့်။ ထောပတ်, တဆေးနှင့်အချဉ်မုန့်စိမ်းဿုံ, moisturize ကပျော့ပျောင်းနှင့် airy စေနှင့်နနွင်းအရောင်နဲ့အရသာအရသာအဟာရဖြည်။ ဤသည်မှာဟောင်းနွမ်း pastries နှင့်ရှည်လျားသောကျန်ရှိနေစိုစွတ်နှင့် buttery မရပါဘူး။
နို့ - 250 ml ကို;
လတ်ဆတ်သောတဆေး - 50 ဂရမ်,
မုန့်ညက် - 700 ဂရမ်;
စပျစ်သီးပျဉ် - 150 ဂရမ်;
ရေနံ - 140 ဂရမ်;
သကြား - 250 ဂရမ်;
နနွင်း - 20 ဂရမ်,
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 120 ml ကို။
နို့၏တဆေး, 20 ဂရမ်သကြားနဲ့မုန့်ညက် 100 ဂရမ်အဆိုပါဘီယာအရက်ချက်ပြင်ဆင်လော့။
190 ဒီဂရီ 45 မိနစ်မှာခွက်နဲ့မုန့်ဖုတ်ကျော်2chasa ပျံ့နှံ့ပြီးနောက်။
အများစုမှာအိမ်ရှင်မမကြာခဏမီးဖိုမုန့်အတွက်အီစတာများအတွက်ရိုးရှင်းသောစာရွက်မှဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ ဒီအချဉ်နို့ထုတ်ကုန်တစ်ဦးနူးညံ့စိုစွတ်နှင့် fluffy ကိတ်မုန့်အောင်။ ဒါဟာအဆီအချဉ်မုန့်အကောင့်ကိုယူရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆီ - တဆေးကိုအလုပ်လုပ် Non-ချောကျိကျိနိုင် - အပိုအစိုဓာတ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မုန့်စိမ်းထူ Cleckley စေသည်ပါလိမ့်မယ်။ ပေးနိုင်သော - 20% အဆီအချဉ်မုန့်။
မုန့် 20% - 250 ဂရမ်;
ရေနံ - 150 ဂရမ်;
မုန့်ညက် - 800 ဂရမ်;
စပျစ်သီးပျဉ် - 300 ဂရမ်
သကြား 10 ဂရမ်နဲ့မုန့်ညက် 200 ဂရမ် Add နဲ့ 30 မိနစ်ဘီယာအရက်ချက်ကြကုန်အံ့။
ကြက်ဥ, သကြား, ထောပတ်နှင့်အချဉ်မုန့်, မုန့်ညက်, စပျစ်သီးပျဉ်ရိုက်ထည့်ပါ။
180 ဒီဂရီမှာမီးဖိုမိနစ် 30 အတွင်းရိုးရှင်းပြီး Delicious အီစတာချဉ်မုန့်စာရွက်မုန့်ဖုတ်။
အီစတာများအတွက်ရိုးရှင်းပြီးအရသာကိတ်မုန့်တဆေးမပါဘဲဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ မကြာသေးမီက kefir နှင့်အတူအလွန်လူကြိုက်များစာရွက်။ မုန့်စိမ်းအထောက်အထားမလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုဖုတ်နှင့်အတူတာပိုမိုလွယ်ကူကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်ပိုမိုလျင်မြန်စွာချက်ပြုတ်ဖြစ်လာသည်။ သငျသညျကွီးစှာသောကိတ်မုန့်ဖုတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကသေးငယ်တဲ့မှိုသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏: အနည်ထိုင်မရကိတ်မုန့်ပိုမြန် propekutsya ။
kefir - 300 ml ကို;
မုန့်ညက် - 350 ဂရမ်;
သကြား - 150 ဂရမ်;
စပျစ်သီးပျဉ် - 100 ဂရမ်
ဒိန်ချဉ်နှင့်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ, သကြား, စပျစ်သီးပျဉ်, ထောပတ်နှင့်မုန့်ညက်ရောမွှေပါ။
180 ဒီဂရီမှာ 35 မိနစ်ဖုတ်ရမည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာပရိတ်သတ်တွေထောပတ်မပါဘဲအီစတာများအတွက်အလွယ်ကူဆုံးကိတ်မုန့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရသာနှင့်အနံ့အတွက်ကဂန္ဖို့နဲ့အစားအသောက်အရည်အသွေးတွေအပေါ်ယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်ကအားလုံးကိုနို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များနှင့်ရေအဆင်သင့်ဖယ်ရှားသောကွောငျ့, ကထက်မလွန်။ အဆိုပါရလဒ် - တစ်ကိတ်မုန့်မသာအသုံးဝင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းဘတ်ဂျက် pastries ။
ရေ - 250 ml ကို;
မုန့်ညက် - 550 ဂရမ်;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 70 ml ကို;
သကြား - '60
အစိတ်အပိုင်းများ၏ကျန် Add နှင့် 1.5 နာရီကြာမှမုန့်စိမ်းထားခဲ့ပါ။
220 ဒီဂရီ 15 မိနစ်မှာ rasstoyatsya မိနစ် 30 နှင့်မုန့်ဖုတ်ပေးလာကြတယ်။
အားလပ်ရက်စားပွဲပေါ် Meatless သုပ်
လက်ဖက်ရည်အဘို့အ Lenten pastries - မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အရသာရှိတဲ့ - ကိုအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
တစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်အရသာနှင့်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများ - ပဲမျိုးစုံထံမှဟင်းလျာများ
အဆိုပါအစာပြွန်ကင်ဆာ - ပထမလက္ခဏာများ
UGG ဂျင်မီ Choo
အိမ်အဘို့ 32 ကြီးမြတ်စိတ်ကူးများ
Benedict Cumberbatch ညစ်ညမ်းသောလိပ်စာများအတွက်ဗြိတိသျှအစိုးရကိုစလှေတျထားပါတယ်
အဲလစ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဘယ်အရာကိုမ
Multivarka အတွက် Pyanse - စာရွက်
သားသမီးတို့အဘို့ Turpentine ဆီမွှေးချောင်းဆိုး
နယူးမိခင် Anne Hathaway အားကစားခန်းမထဲမှာချွေးသွားသည်မဟုတ်
ကျွန်တော်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာမှတ်မိနေလိမ့်မည်သည့် 2017 ခုနှစ်တွင်ထိပ်တန်း-17 ကြယ်ပွင့်မင်္ဂလာဆောင်,
အမျိုးသမီးအင်္ကျီ - အဘယ်အရာကိုအဝတ်အစား၏ဤဖက်ရှင်ဆောင်းပါးဝတ်ဆင်နည်း